Sama Taxanaha Alaabta Guriga - Joornaalka Naqshadeynta
Taxanaha Alaabta Guriga
Taxanaha Alaabta Guriga Sama waa taxane alaab guri oo dhab ah oo bixiya waxqabad, khibrad shucuur iyo mid gaar ahaaneed iyada oo loo marayo qaabkeeda ugu yar, qaababka wax ku oolka ah iyo saameynta muuqaal ee xooggan. Dhaqan-gelinta dhaqanka ee laga soo qaatay gabayada dharka giraanta ee lagu xidho xafladaha Sama ayaa dib loogu tarjumay naqshadeeda iyada oo loo marayo ciyaar joomatari ahaan iyo farsamooyin foorarsiinta biraha. Muuqaalka qaabdhismeedka taxanaha ah waxaa lagu daraa fudaydka qalabka, foomamka iyo farsamooyinka wax soo saarka, si loo bixiyo hawl & amp; faa'iidooyinka bilicsanaanta. Natiijadu waa taxane alaab casri ah oo siinaya taabasho gaar ah meelaha lagu nool yahay.
Magaca mashruuca : Sama, Magaca naqshadeeyayaasha : Fulden Topaloglu, Magaca macmiilka : Studio Kali.
Taxanaha Alaabta Guriga Fulden Topaloglu Sama